Xog ku saabsan siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya -
Xog ku saabsan siyaasiyiinta ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya
Warar uu helay Wargeyska Tusmo Times ayaa sheegayaa in Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya ay bilaabeen in ay soo dhaweystaan siyaasiyiinta mucaaradka ku ah Hay’adaha Dowladda Soomaaliya.
Waxaa siyaasiyiintaas ka mid ah gudoomiyaha Xisbiga Wadajir iyo ku xigeenadiisa uu kuu ma kid ka yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Xisbiga Damul Jadiid oo uu ka mid yahay Cabdikariin Xuseen guuleed.
Waxaa wararku intaas ku darayaan in hadda lagu howlan yahay Cumar cabdirashiid iyo kuwo kale oo iyana la damacsan yahay in la soo xero galiyo si ay u taageeraan dowladda.
Arintan haddii dowladda iyo masuuliyiinta xilka haya ay ku guuleystaan waxaa meesha ka baxaya mucaarad waxaana dowladda, waxaana u sahlanaanaysa in xitaa Shabaab laga saaro dalka oo dhan.
Dowladan waxay horay ugu guulaysatay in ay is fahmaan oo ay wada shaqeeyaan Madaxda Maamulad ka jira soomaaliya ee Dowlad Goboleedyada ah. haatana waxay xogtu sheegayaa in ay ku howlan yihiin soo xaro galinta siyaasiyiinta Dowlada Mucaaradasan oo dhan.
Xogan ayaan waxaan ka helnay Saraakiil ka shaqeeya Xafiisyada Hay,adaha Dowlada Soomaaliya waxana naga Codsadeen in magacyadoodu Aanay Adeegsan.
Related Items:Featured, Xog ku saabsan Siyaasiyiinta ka soo Horjeeda dowladda Soomaaliya
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya oo ka hadlay khilaafka ka taagan Dekeda Muqdisho iyo Arrimaha Canshuurta
Yaa u sharaxan kursiga Xildhibaanimo ee Marxuum Cabaas Siraaji